Sheekada filimka F2: Fun And Frustration: Venkatesh iyo Varun Tej waxay la imaadeen fariin wacan – Filimside.net
Sheekada filimka F2: Fun And Frustration: Venkatesh iyo Varun Tej waxay la imaadeen fariin wacan
Fanka Telugu gaar ahaan Tollywood xili wacan ayuu bartanka kaga jiraa waxaana la dhihi karaa wey ka baxeen in lagu tilmaamo fan goboleed waxayna noqdeen fan Hindiya oo dhan matalo marka loo fiiriyo fariimaha wacan oo ay sameenayaan oo dhamaan daafaha caalamka laga daawanayo markaana waxay loolan toos ah ku hayaan shirkada Hindiya ugu weyn ee Bollywood.
Haddaba waxaa siweyn loo amaanayaa filimka Tollywood-ka ah F2: Fun And Frustration oo xambaarsan fariin waaqici ah oo isugu jirto jaceyl, arimaha qoyska iyo shactiro waana filim dagan oo ay ka muuqato in Telugu kaliya Action sameynta ku wacneyn sidoo kalena fariimaha dagan ee heerka sare ah sameyn karaan.
Jilaayaasha Filimkan: Venkatesh, Varun Tej, Tamanaah Bhattia iyo Mehreen
Fariinta Filimkan Oo Kooban: Venky (Venkatesh) waa wiil agoontinimo kusoo koray wuxuuna guursanayaa gabadha ay sida dhaqsida ah isku fahmayaan Harika (Tamannaah). Laakiin mudo lix bilood kadib guurkooda is fahan daro dhanka nolosha ah ayaa soo kala dhex galeyso lamaanahan.
Dhanka kale wiilka dhalinta yar Varun (Varun Tej) waa mid aan masuuliyad isi saarin wuxuuna jeclanaayaa Harika (Tamannaah) walaasheed ka yar Honey (Mehreen Pirzada) kadibna wey is fahmayaan ayagoo faraanti isku galinayaan laguna balamaayo guurkooda inuu si dhaqsi ah ku dhaco.
Laakiin Venky (Venkatesh) iyo Varun (Varun Tej) ayaa wada sheekeesanayaan waxayna isku sheegayaan mid walbo dhibka uu ku qabo lamaantiisa madaama ay xiriir la leeyihiin labo gabdhood oo walaalo ah waxayna ku heshiinayaan inay magaalka galaan sidoo kalena farxad iyo bashaal banaanka ka raadsadaan markii dambena waxay aaminayaan guurka iyo guri jooga inay ka wanaagsan tahay iskaabulonimada ama kilinimada madaama wixii ay doonaayn sameyn karaan!
Balse maxaa dhici doono labada gabdhood ee walaalaha ah Harika (Tamannaah) iyo Honey (Mehreen Pirzada) marka ay ogaadeen in nimankooda bad kale iska galeen iyagana waxay go’aan ku gaarayaan inay sameeyaan wax walbo oo ay raggadooda ku maseer galin karaan ama ay dib ugu soo ceshan karaan.
Maxaa Laga Yiri Fariinta filimka F2: Waa fili mada daalo dhameestiran leh dhanka shactirada, jaceylka iyo haddalada la adeegsanayo halka saac hore gudaha Hindiya ayaa lagu duubay waana mid yarra dagan balse halka saac dambe marka Yurub la tago inaba caadi ma ahan is xifaaleynta iyo dareenka qiirada badan ee afarta hogaamiye filimkan dhex maraayo.
Director Anil Ravipudi fariin cusub ma dooranin laakiin fariimahii la sameyn jiray ayuu cusbo u yeelay hab wacan oo qoysaska soo jiidaneyso ayuu u dhigay waana sababta ka dhigeyso filimka F2 mid siweyn daawadayaasha kuu raali galinaayo dhan walbo.
Bandhiga Jilaayaasha: Venkatesh waa ruuxda filimka F2 inaba caadi ma ahan sida uu kuu mada daalinaayo waxaa ka muuqato halyeegan weli inuu tamar badan u haayo dhanka shaashada waxaana hubaal ah marka aad daawatid F2 haddii aadan Venkatesh taageero u ahayn inaad xitaa doorkiisa siweyn kaga heli doontid.
Varun Tej waa dadaalay isagana wuxuu ku amaanan yahay inuu halyee Venkatesh la jaan qaaday wuxuuna muujiyay wiilkan dhalinta yar doorarka dagan inuu si wacan ugu soo baxaayo kaalintiisana si wacan ayuu kaga soo baxay.
Labada atirisho ee filimkan walaalaha ku jilaayo Tamannaah and Mehreen iyagana doorar ku filan ayaa la siiyay waxayan muhiim u yihiin qaabka shekada F2 u dhaceyso xili walbo.
Ruug cadaa Prakash Raj (See rabtaa) doorkiisa waa mid xiiso badan saameyna filimkan ku leh wuxuuna ku jilaa dhanka labada atirisho qof saaxiib ama qaraabo la ah kaasi oo marwalbo usoo sheego nimankooda qaladaadka ay magaalada ka sameeyaan.
Muxuu Ku Wanaagsan Filimka F2:
Bandhiga Venkatesh oo ah qofka filimkan loo daawanayo.
Shactirada iyo is xifaaleynta hogaamiyaasha filimkan
Muusiga mashruucan oo ah mid wacan
Muuqaalada goobaha lagu duubay iyo qaabka loo faaf reebay oo heer sare ah.
Muxuu Ku Liitaa Filimka F2:
Fariin cusub ma ahan waa fariimihii horey loo sameyn jiray
Halka saac dambe oo xoogaa ah mid iska dhex dhexaad sheeko ahaan
Gunaanad: F2 waa filim mada daalo dhameestiran siweyn qoysaska kaga heli doonaan sheekadiisana wacan tahay una dheer tahay bandhiga jilaayaasha oo filimkan aad u sareyso arimahan oo is kaashaday iyo lacagaha kooxda cajaladaha qeybiyaan ku iibsadeen oo ah 32 Crore aad u xadidan waxay ka dhigan tahay mashruucaan inuu guul weyn gaari doono.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka F2: Fun And Frustration adigaaba ka heli doontid filimkan la wada amaanayo fariintiisa qoysaska loogu tala galay:
Waxaa Aqrisay 905